အောက်မှာ Filed DT2. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. DT2, ဒိန်းမတ်, Dutchtown CIDနှင့် Dutchtown ဖြစ်ရပ်များ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
အောက်မှာ Filed DT2. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. DT2, ဒိန်းမတ်, ရန်ပုံငွေရှာနှင့် UrbanMain. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
MMSC ၏ Downtown Strong Grants အတွက်လျှောက်ထားပါ
အပေါ် Posted ဧပြီလ 28th, 2021
မစ်ဆူရီပင်မလမ်းဆက်သွယ်မှု Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေများစွာပေးနေသည်။ ဤထောက်ပံ့ငွေများကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သည် အမေရိကန်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ၏ဆိုးကျိုးများမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပြန်လည်ထူထောင်ရန်နှင့်မစ်ဆူရီတလျှောက်လုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ဒေသတွင်းစီးပွားရေးကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီရန်။
အတွင်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ UrbanMain ခရိုင် (အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် Grand, Meramec နှင့်ဗာဂျီးနီးယားတစ်လျှောက်) စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, စစ်ဆင်ရေးနှင့်အခြားအရာများအတွက်ကူညီရန်ရန်ပုံငွေနှစ်ခုအထိလျှောက်ထားနိုင်သည်။ Dutchtown အဖွဲ့အစည်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားဤထောက်ပံ့ငွေများကိုလျှောက်ထားရန်ကူညီပေးနေသည်။
လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်သည်အတော်လေးရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းများထံမှဖြစ်သည် DT2 · Downtown Dutchtown သင်လျှောက်ထားကူညီရန်အဆင်သင့်နှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်။ သင်၏စီးပွားရေး၏ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအဆိုပြုချက်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်အတူလိုအပ်သောအနည်းဆုံးစာရွက်စာတမ်းများစုဆောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
ကူးစက်ရောဂါကြောင့်သင်၏စီးပွားရေးအပေါ်မည်သည့်သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုသင်ပြသရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ COVID-19 ကြောင့် ၀ င်ငွေဆုံးရှုံးခြင်း၊ ၀ န်ထမ်းများကိုအလုပ်ထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။
ထောက်ပံ့ငွေလက်ခံသူများသည်ထောက်ပံ့ကြေး၏စုစုပေါင်းတန်ဖိုး၏ ၅% ကိုထုတ်ပေးရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ထောက်ပံ့ကြေးရလျှင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေဒေါ်လာ ၂၅၀ ကိုသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
သင်သည်Aprilပြီ ၈ ရက်တွင်ထောက်ပံ့ကြေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့ရမည် (သို့) သင်တက်ရောက်ခဲ့သည့်ရပ်ရွာကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ DT8 မှစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတော်များများအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်ရှိနေကြပြီးသင့်ကိုကူညီရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
ထောက်ပံ့ငွေလျှောက်ထားရန်အကူအညီလိုပါသလား။ DT2 မှစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများသည်သင်၏လျှောက်လွှာကိုအဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင်မေလ ၁ ရက်နံနက် ၁၀ နာရီမှညနေ ၃ နာရီထိ Neighborhood Innovation Centre ၌ရှိလိမ့်မည်။ သင်၏ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်လွှာကိုအီးမေးလ်ဖြင့်သာပြင်ဆင်ရန်သင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်နောက်တစ်ကြိမ်စီစဉ်နိုင်သည် jessica@dutchtownstl.org.
သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် ပြီးပြည့်စုံသော application packet ကိုဤနေရာတွင် download လုပ်ပါ.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်သောထောက်ပံ့ငွေအမျိုးအစားတစ်ဒါဇင်ကျော်ရှိသည် (စီးပွားရေးတစ်ခုစီသည်ထောက်ပံ့ငွေတစ်ခု (သို့) နှစ်ခုအတွက်သာလျှောက်ထားနိုင်သည်) ။ သို့သော်အောက်ဖော်ပြပါအမျိုးအစားများအပြင်လျှောက်ထားသူများကိုတီထွင်ဖန်တီးရန်လည်းအားပေးသည်။ MMSC ကိုသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ထောက်ပံ့ငွေများကိုရနိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လျှောက်ထားရန်စဉ်းစားရန်လိုသောထောက်ပံ့ငွေဥပမာအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။ တနည်းကား, ဖန်တီးမှုရရန်အခမဲ့ခံစားရ! သင်၏စီးပွားရေးတွင်ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များရှိပါက (၎င်းအားလုံးသည်) ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်ကိုပြသရန်သင်၏လျှောက်လွှာကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးအကွာအဝေးကိုဒေါ်လာ ၂,၂၆၀ မှ ၆,၉၀၀ အထိတိုးမြှင့်နိုင်ရန်ကူညီထောက်ပံ့မှုကိုရယူပါ။ ဤထောက်ပံ့ငွေများကိုစီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း၊ စီးပွားရေးဖြေရှင်းနည်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ဒေသတွင်းရင်းမြစ်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအစပျိုးမှုနှင့်အဆိုင်းများဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးမြှင့်တင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတိုင်ပင်ခံများကသင်၏စီးပွားရေးအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်စာရင်းပြုစုခြင်း၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအသစ်များပေါ်သို့တက်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ဆိုင်ကိုပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ကုန်သွယ်ခြင်းစသည့်တိုးတက်မှုအတွက်အကြံဥာဏ်များပေးရန်။ စီးပွားရေးအကဲဖြတ်မှုများအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးများကိုဒေါ်လာ ၂၂၆၀ ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်၊ ကန ဦး ၅ ရာခိုင်နှုန်းဒေါ်လာဒေါ်လာ ၁၁၃ ဒေါ်လာရရန်လိုအပ်သည်။
သင့်လုပ်ငန်းတွင်တရားဝင်စီးပွားရေးစီမံချက်ရှိပါသလား။ သင်၏အစီအစဉ်ကိုလေ့ကျင့်ထားသောစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံများထံမှအကူအညီရယူရန်လျှောက်ထားပါ။ ဘဏ္businessာရေးလုံခြုံမှုရှိရန်၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်အကျိုးရှိရန်နှင့်တိုးတက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်သင်၏စီးပွားရေးကိုတည်ဆောက်ရန်လမ်းပြမြေပုံကိုရေးဆွဲပါ။ စီးပွားရေးအစီအစဉ်များအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးများကိုဒေါ်လာ ၂,၇၆၀ မှဒေါ်လာ ၄၇၁၀ အထိရနိုင်သည်။ မင်းရဲ့ ၅% ကန ဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဒေါ်လာ ၁၃၈ ကနေ ၂၃၅ အထိဖြစ်မယ်။
Business Solutions ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ
သင်၏စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များကိုအကဲဖြတ်ပြီးနောက်အကြံပေးများသည် ၀ န်ထမ်းများ၊ စာရင်းကိုင်နှင့်ငွေကြေးစသည့်ပြaddressနာများကိုဖြေရှင်းရန်အဖြေရှာနိုင်သည်။ စီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များအတွက်ထောက်ပံ့ငွေသည်ဒေါ်လာ ၂၇၆၀ မှ ၅၀၆၀ အထိရှိပြီးရှေ့ပြေးဒေါ်လာ ၁၃၈ မှ ၂၅၃ အထိရှိသည်။
အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှသင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်ဒေသတွင်းစီးပွားရေးအတွက်သင်၏ထောက်ခံမှုကိုမြှောက်ပါ။ အနီးအနားရှိစာရင်းများကိုရှာဖွေခြင်း၊ သင်၏ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အားတိုစေခြင်းနှင့်ဒေသတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကိုကူညီပါ။ ဤထောက်ပံ့ငွေများကိုဒေါ်လာ ၂၂၆၀ မှ ၅၀၆၀ ဒေါ်လာအထိရရှိနိုင်ပါသည်၊ ၅၃% ပွဲစဉ်ကိုဒေါ်လာ ၁၁၃ မှ ၂၅၃ အထိရနိုင်သည်။
Operational Growth Initiatives နှင့် Shifts
ကြီးထွားရန်ရှာဖွေနေပါသလား အကြံပေးသူများသည် ၀ န်ထမ်းများထပ်မံဖြည့်ရန်၊ သင်၏ဆိုင်ကိုချဲ့ရန်သို့မဟုတ်နောက်ထပ်နေရာများဖွင့်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ စစ်ဆင်ရေးထောက်ပံ့ငွေသည်ဒေါ်လာ ၂၃၀၀ မှဒေါ်လာ ၄၆၀၀ အထိရှိပြီးရှေ့တန်းပြိုင်ပွဲဒေါ်လာ ၁၁၅ မှဒေါ်လာ ၂၃၀ အထိလိုအပ်သည်။
သင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဖောက်သည်အခြေပြုတည်ဆောက်မှုကိုအထောက်အကူပြုမည့်အထူးအရောင်း၊ ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားအရာများပေါ်တွင်မြှင့်တင်သည့်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။ မြှင့်တင်ရေးထောက်ပံ့ငွေကိုဒေါ်လာ ၂,၃၀၀ မှ ၆,၉၀၀ မှရရှိနိုင်သည်။ $ 2,300 မှ $ 6,900 ၏ကန ဦး ၅% ပွဲစဉ်ကိုလိုအပ်လိမ့်မည်။
သင်၏အိမ်ရှေ့တံခါးမှမဟုတ်ပါကဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ရန်သင်၏သင်၏ e-commerce ပလက်ဖောင်းအသစ်ကိုတည်ဆောက်ပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးများကိုဒေါ်လာ ၄၆၀၀ မှ ၈၀၀၀ အတွင်းရရှိနိုင်သည်။
သင်၏ E-Commerce ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတည်ဆောက်ပါ
သင့်ဖောက်သည်များသည်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်းအွန်လိုင်းမှစျေး ၀ ယ်နိုင်သလားဟုမေးမြန်းခဲ့သလား၊ သင်၏စီးပွားရေးအတွက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အွန်လိုင်းဆိုင်ဖွင့်ရန်ထောက်ပံ့ငွေတစ်ခုကိုလျှောက်ထားပါ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တီထွင်ထုတ်လုပ်သူများကသင့်ဆိုင်ကိုကိုယ်တိုင် ၀ င် ရောက်၍ မရနိုင်သောဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ရန်သင့်အား web storefront တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကူညီပါလိမ့်မည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ထောက်ပံ့ငွေသည်ဒေါ်လာ ၄၆၀၀ မှ ၈၀၀၀ အထိရှိသည်။ ၅% ကန ဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ဒေါ်လာ ၂၃၀ မှ ၄၀၀ အထိဖြစ်သည်။
ဒေါ်လာ ၄၂၆၀ မှ ၁၁,၉၆၀ အထိထောက်ပံ့ကြေးဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်လက်တည်မြဲရန်အတွက်စီစဉ်ပါ။ ဤထောက်ပံ့ငွေများကိုစီးပွားရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ် (သို့) ပိုင်ရှင်ဆက်ခံမည့်အစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
တစ် ဦး ချင်းစီစီးပွားရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်
သင်၏လုပ်ငန်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တိုးချဲ့ရန်အခွင့်အလမ်းအမျိုးမျိုးရှိသောသင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုရယူပါ။ ဤစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ထောက်ပံ့ငွေကိုဒေါ်လာ ၉၂၀၀ မှ ၁၁၉၆၀ အထိရရှိနိုင်သည်။ ကန ဦး ပွဲစဉ်သည်ဒေါ်လာ ၄၆၀ မှ ၅၉၈ ဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအငြိမ်းစားယူရန်၊ ရောင်းချရန်သို့မဟုတ်သင်၏လက်ရှိလည်ပတ်မှုမှနုပျိုစွာထွက်ရန်စဉ်းစားနေပါကအကြံပေးသူများကနောက်အဆင့်များကိုစီစဉ်နိုင်သည်။ ဆက်ခံရန်အစီအစဉ်ထောက်ပံ့ငွေသည်ဒေါ်လာ ၄၂၆၀ မှ ၈၀၆၀ အထိရှိပြီး ၅% ပွဲစဉ်ကိုဒေါ်လာ ၂၁၃ မှဒေါ်လာ ၄၀၃ အထိလိုအပ်သည်။
စမ်းသပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံများသည်ဒေါ်လာ ၂,၂၆၀ မှ ၆,၀၈၀ အထိထောက်ပံ့ကြေးများဖြင့်မြေပြင်ပေါ်သို့တက်နိုင်သည်။ ဤထောက်ပံ့ငွေများတွင်စျေးကွက်အလားအလာများကိုစမ်းသပ်ရန်အထူးသဖြင့်လက်မှုပညာရှင်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်သမဝါယမစီးပွားရေးပုံစံများပါဝင်သည်။
ဒေသခံထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကမ်းလှမ်းပါ။ ဒေသခံဒီဇိုင်နာနှင့်သီးသန့်လက်လီရောင်းဝယ်မှုအသစ်ကိုဖန်တီးပါ။ သို့မဟုတ်လယ်သမားများနှင့် လက်တွဲ၍ အထူးမီနူးတစ်ခုကိုတီထွင်ပါ။ ထိုထောက်ပံ့ငွေများကိုဒေါ်လာ ၂၂၆၀ မှ ၅၀၆၀ ဒေါ်လာအထိရရှိနိုင်ပါသည်၊ ၅၃% ပွဲစဉ်ကိုဒေါ်လာ ၁၁၃ မှ ၂၅၃ အထိရနိုင်သည်။
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးနှင့်အတွေးအမြင်အသစ်များကိုစစ်ဆေးပါ ဤထောက်ပံ့ငွေသည်ဒေါ်လာ ၄၂၆၀ မှ ၆၀၈၀ အထိရှိသည်။ ကန ဦး ပွဲကိုဒေါ်လာ ၂၁၃ မှ ၃၀၄ အထိပေးရမည်။
ဒေါ်လာ ၁၈၀၀ မှ ၈,၂၆၀ အထိထောက်ပံ့ကြေးဖြင့်သင်၏အွန်လိုင်းတည်ရှိမှုကိုတိုးတက်အောင်ကူညီပါ။ စီးပွားရေးဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်၊ ကြော်ငြာနည်းဗျူဟာများစူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ လူမှုမီဒီယာများပါ ၀ င်မှုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ သင်၏ဖောက်သည်အခြေပြုအမျိုးမျိုးကိုတိုးချဲ့ခြင်း၊
လူမှုမီဒီယာအတိုင်ပင်ခံများသည်သင့်အားအမျိုးမျိုးသောပလက်ဖောင်းများပေါ်တက်နိုင်အောင်ကူညီခြင်းနှင့်အသစ်ရှိပြီးရှိပြီးသားသုံးစွဲသူများကိုဆွဲဆောင်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်သည်ဒေါ်လာ ၄၃၀၀ မှဒေါ်လာ ၇၃၆၀ အထိရှိသည့်ထောက်ပံ့ကြေးများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် ၅% ပွဲစဉ်ကိုဒေါ်လာ ၂၃၀ မှ ၃၆၈ အထိလိုအပ်လိမ့်မည်။
အကြံဥာဏ်ပေးသူများသည်သင်၏စီးပွားရေးပန်းတိုင်များကိုသင်နှင့်ဆွေးနွေးပြီးနောက်၎င်းရည်မှန်းချက်များပြည့်မီရန်သင်ကူညီမည့်ကြော်ငြာအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ ဤထောက်ပံ့ငွေသည်ဒေါ်လာ ၁၈၀၀ ဖြစ်သည်။ $ 1,800 ကစားရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏လက်လှမ်းမီမှုကိုချဲ့ထွင်ရန်နှင့်လက်ရှိဖောက်သည်အသစ်များနှင့်ထိတွေ့ရန်အတွက်လူမှုမီဒီယာအတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး နှင့်အလုပ်လုပ်ပါ။ ဒေါ်လာ ၁၈၀၀ ထောက်ပံ့ကြေးရနိုင်ပြီး၎င်းသည် ၅% ပွဲအတွက်ဒေါ်လာ ၉၀ လိုအပ်သည်။
ဖောက်သည်အသစ်များကိုဆွဲဆောင်ရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများဖြင့်သင်၏ဖောက်သည်များကိုမည်သို့ချဲ့ထွင်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။ ထောက်ပံ့ငွေသည်ဒေါ်လာ ၂၃၀၀ မှ ၅၀၆၀ အထိရှိပြီးကန ဦး ပွဲစဉ်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၁၅ မှ ၂၅၃ အထိရနိုင်သည်။
အွန်လိုင်းမှာရောင်းပြီးပြီလား ပိုမိုကြီးမားသောရောင်းအားများကိုမောင်းနှင်ရန်သင်၏အွန်လိုင်းစတိုးအသွင်အပြင်ကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်မည်သို့လေ့လာရမည်။ ဤထောက်ပံ့ငွေသည်ဒေါ်လာ ၂,၆၀၀ မှ ၈,၂၆၀ အထိရှိသည်။ $ 2,600 မှ $ 8,260 တစ်ပြိုင်ပွဲလိုသည်။
လျှောက်လွှာတင်ချိန်သည်မေလ ၇ ရက်နေ့တွင်အဆုံးသတ်ပါမည် ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်နီးချင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုစင်တာတွင်မေလ ၁ ရက်၊ စနေနေ့နံနက် ၁၀ နာရီမှညနေ ၃ နာရီအထိနာရီပေါင်းများစွာဖွင့်နိုင်သည်။ သင်၏ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်လွှာကိုဖြည့်ရန်သင့်အားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ချိန်းဆိုမှုများကိုလည်းပြုလုပ်ပေးပါမည်။ သင်သည်လျှောက်လွှာကိုဤနေရာတွင် download လုပ်နိုင်သည်.
အောက်မှာ Filed Uncategorized. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. Uncategorized. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဧပြီလ 28th, 2021 .
ဆိုင်အသစ်များလည်း Downtown Dutchtown သို့လည်းရောက်လာသည်။ အသစ်ရောက်ရှိလာသောပါဝင်သည် Kwambokaအဝတ်အစားများ၊ လက်ဆောင်များနှင့်အခြားကုန်ပစ္စည်းများရောင်းသည့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်; Boutique ကိုမမေ့ပါနှင့်အမျိုးသမီးအဝတ်အထည်များ၊ အပိုပစ္စည်းများနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာစောင့်ရှောက်မှုအထူးပြုခြင်း၊ နှင့် Melanin Made Beauty သည်ဆံပင်နှင့်အလှအပပစ္စည်းများအပြင်ပြန်လည်ရောင်းချသည့်အဝတ်အစားများကိုလည်းရောင်းချခဲ့သည်။ ဆံသဆိုင်အသစ်များနှင့်အလှပြင်ဆိုင်များသည်လည်း Meramec တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ Grand Cross သူတို့ရဲ့တည်ထောင်ခဲ့သည် အသစ်အုတ်နှင့်မော်တာတည်နေရာ။ Dutchtown တွင်နေထိုင်သူများကလုပ်ကိုင်သောစီးပွားရေးသည်ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ ပွဲစီစဉ်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများကိုကမ်းလှမ်းသည်။
၂၀၂၀ နှောင်းပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုးပမ်းမှုအသစ်များကိုစတင်ခဲ့သည် အသစ်ရှိပြီးတည်ဆဲ Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်သွယ်ပါ အရောင်းမောင်းနှင်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ပေးရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ DT2 မတိုင်မီနာရီများဖြစ်ရပ်များ - ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအားအရင်းအမြစ်များကိုတွေ့ဆုံရန်၊ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့်ခွဲဝေရန်အခွင့်အရေးပေးသည့်ကော်ဖီနာရီများ - ကိုလည်းစတင်ခဲ့သည်။ သင်ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ် dutchtownstl.org/business.
အောက်မှာ Filed Covid-19. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. Covid-19, DT2, ဒိန်းမတ်, Dutchtown စီးပွားရေး Showcase, ရန်ပုံငွေရှာ, Marquette ပန်းခြံနှင့် UrbanMain. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.